लेख्नुको अर्थ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← गोप्य सूचना खुलासाको अमेरिकी राजदूतद्वारा खेद व्यक्त
विश्वको पहिलो 256 GB क्षमताको USB flash Drive →
– अजय घिमीरे, कुवेत
लेख्नुको के अर्थ छ, मैले कहिल्यै बुझ्न सकिँन । आज लेख्नुको अर्थ पत्ता लगाउनका लागी लेख्ने बिचार गरे । हीरा काट्नको लागी हिरा नै चाहीन्छ, त्यसैले लेख्नुको अर्थ पत्ता लगाउन लागी लेख्नै पर्छ । यसरी आज सम्म कसैले पत्ता लगाउन नसकेको कुरा पत्ता लगाउने अठोट गरें ।
मलाई लाग्छ लेखाई एउटा रोग हो, लेखक यसका रोगी र शब्द यसको एकमात्र अचुक औषधी । तर हास्यापद कुरा के छ भने सबै चाहन्छन् यो रोग लागोस् । विडम्बना नै भनौं यस रोगले मलाई सानैमा समात्यो । सत्यता के हो भने चाहेर हैन दवाबमा अर्थात तनावमै यस रोगले मलाई जगड्यायो । कसैले यसो खेलेको देख्यो भने चण्डीको रौ उखेल्दै भन्थ्यो पढ्नु पर्दैन्, खेलेर मात्र हुन्छ ? जा गएर पढ । त्यसताका लेख्नुको पिडा कति सम्म हुन्थ्यो भने म भक्कानिएर रुन्थे । त्यसरी रोएको कसैले देख्यो भनें भन्थ्यो लेख्नु पर्छ भनेर नाटक पार्दैछ । यसरी हप्कीदप्कीमै मैले लेख्न सुरु गरें ।
लगातार १५–१६ बर्ष देखि लेखिरहेछु, थाहा छैन अभैm कति लेखिएला । लेख्दा लेख्दा औला घोटिएर छोटा भईसके । कति सम्म लेखे भन्ने कुराको ठेगान छैन । लेखाईदेखि कति भागियो कति त्यसको कुनै जोखना छैन । राम्रो त खै कुन्नि फोहोरी कति लेखियो लेखियो । लेख्दा लेख्दा थाकेको शरीरको थकाई मेटाउन कति लेखियो कति ?
आमा भन्नुहुथ्यो पढेर मात्र हुदैन लेख्नु पनि पर्छ, त्यसैले लेख छोरा लेख ! त्यसैले जानेर लेखे, नजानेर लेखे, चोरेर लेखे, सही लेखे, फेद न टुप्पोको लेखे तर लेखे मैले लेखे । गुरुजी भन्नुहुथ्यो यसले कम लेख्छ, यसलाई अझ धेरै लेखाउ । नलेखेर त कति हो कति, लेखेंर पनि कुटाईं खाएँ । परिक्षामा मज्जाले लेखें, खोई के लेखीयो थाहा छैन तर आखिरमा आफ्नै लेखाईलाई सरापें । मेरा बुढा बा सोध्थे छोरा कति लेखिस् ? म पल्टाएर देखाईदिन्थे लेखेका ति पानै पाना, अनि के चाहियो र ? छाति फुलाउँदैं बुढा भन्थे यो पुरा गाँउमा मेरो छोराले जति कसैले लेख्दैन । सोझा बुढालाई के थाहा नाथे लेखेर के पो हुन्छ र ? “बाबु यति काम गरिदे”,—आमा भन्नुहुन्थ्यो । म झर्केर भन्थे गर्दिन म काम–साम । मलाई लेख्नु छ, धेरै लेख्नु छ । यसमा के फार्ईदा हुन्थ्यो भने लेखाईले गर्दा मलाई काम गर्नु पर्दैनथ्यो । लेखाई कस्तो भनें त्यसको कुनै तोड हुन्नथ्यो । साउनको भेल जस्तो चारै तर्पm बढारीएर बग्थ्यो । एकदिन गुरुजीले यसले लेखेन भनेर कुट्नुभो, कुटेर मात्र कहाँ पुग्नु र बतुराउन थाल्नुभो । मैले पनि रीसको झोंकमा लेखीदिएँ बरबराए जति सबै । उहाँले गाली गर्दै जानुभो म लेख्दै गएँ सुने जति । आखिरमा देखाईदिएँ लेखेको सबै अनि त के चाहियो र बुढाले हाँस्दै भने यो जरुर पत्रकार बन्नेछ । पत्रकार त कहाँ हुनु पत्रको कार चाँही अवश्य बनीयो ।
एकताका लेख्नुको मोह यसरी जाग्यो म जहीं–तहीं लेख्थें । थाहा हुन्थेन के लेख्दैछु, कहाँदेखी कतासम्म लेख्दैछु । आमा मेरी त्यसै मख्ख भन्नुहुथ्यो— “छोरो लेखीरहेछ, लेखेर ठुलो मान्छे बन्छ” । मेरी आमालाई भुत्राको थाहा लेखेर हैन जानेर ठुलो मान्छे होइन्छ । लेख्नका लागी समयले कहिल्यै बाँधेन । म हरजसो समय लेखीरहन्थे । म बिहानै लेख्थे, दिउँसो लेख्थे, बेलुका लेख्थे, मध्यरातमा पनि लेख्थे । लेख्नका लागी ठाउँको कहिल्यै समस्या परेन । स्कुलमा रहँदा बेन्चमाथि लेख्थे, घरमा रहँदा टेवल खाँट या भुँईमै लेख्थे, बसमा रहँदा बसमै लेख्थे । कहिले काँही त उभिँदा उभिँदै पनि लेखियो ।
यहाँ धेरै त हैन अलिकति भए पनि लेखियो तर के लेखियो लेखियो । जे को लागी लेखीयो त्यसको कुनै अत्तो पत्तो छैन । लाग्यो यहिँ कहिँ छ लेख्नुको अर्थ, सरर पढें शुरुदेखि अन्तसम्म तर खोई कहाँ छ अर्थ ? बारम्बार पढें तर अहँ पत्ता लगाउन सकिँन मैले लेख्नुको अर्थ । धेरैबेर सोचे अनि फेरी पढें । मुटु ढक्क फुल्यो, आँखा टक्क अडियो किनकी मैले यहाँ लेख्नुको अर्थ पत्ता लगाएँ । पढ्नका लागी लेख्नु पर्छ र यही हो लेख्नुको अर्थ । कसैले केही लेखेन भने के पढ्ने ? हामीलाई पढ्नुपर्छ र पढ्नको लागि लेख्नुपर्छ । यसरी लेख्नुको अर्थलाई प्रस्ट्राएँ अनि चित्त बुझाएँ ।
त्यसैले म लेख्दै जान्छु तपाई पढ्दै जानुहोस् अनि कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् तब म फेरी लेख्छु ।
One response to “लेख्नुको अर्थ”
Thapa/Bikram Mr. | 02/12/2010 मा 2:25 अपराह्न |
I really enjoyed by reading this article, keep it up !